Wasaaradda Waxbarashada oo soo saartay shahaado cusub oo aan la been abuuri karin – Radio Muqdisho
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta kormeeray xarun Wasaaradda ugu talagashay in lagu bixiyo shahadooyinka ardaydii ku guuleysatay Imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2017-2018 ee ka dhacay bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya.
Wasiirka ayaa ku soo wareegay qeybaha ay ka koobantahay xarunta iyo sida ay u shaqeeyaan howlwadeenada, isagoo dhinaca kale halkaasi kula kulmay waalidiin iyo arday ka mid ah kuwii ka baxay dugsiyada sare oo uu ka dhageystay warbixin.
Mudane Cabdullaahi Goodax Barre Wasiirka Waxbarshada iyo Tacliinta sare oo kormeerka kadib Warbaahinta la hadlay ayaa faah faahin nuuca shahaado ee ay Wasaaraddu soo saartay iyo tirade ardayda dhameysatay dugsiyada sare ee dalka .
“Waa maalin Taariikhi ah waa maalin ay Wasaaradda Waxbarshada ku talaabsatay. waa Qeyb cusub oo daryeelka tacliinta Soomaaliyeed wax weyn ka badalaysa, qeybtan waxa ay tahay qeyb laga bixinayo shahaadooyinka Sanad dugsiyeedka 2017-2018, Wasaaradda waxa ay soo kordhisay shahaado nuuc cusub ah oo ka duwan kuwii hore, isla markaana aan laga been abuuri Karin” ayuu yiri Wasiirka Waxbarashada.
Maxamed Yuusuf Ibraahim oo ka mid ah ardayda ka qalin jebisay dugsiyada sare kuna guuleystay Imtixaankii dowladda,’ ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan shahaadada la guddoonsiiyay.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii tayeyn lahaa waxbarashada dalka, si loo soo saaro arday aqoon leh oo ka qeyb qaadata horumarka dalka.